DAAWO SAWIRO:- Dowlada Qatar oo kafaalo qaaday nolosha caruurtii ku agoontoobay weerarkii Soobe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Dowlada Qatar oo kafaalo qaaday nolosha caruurtii ku agoontoobay weerarkii Soobe
Hiiraan Xog, In ka badan 350 caruur ah oo ka mid ah dhalaankii ku agoontoobay weerarkii hal sano ka hor ka dhacay Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta kafaalo qaaday dowladda Qatar.
Munaasabadda hay’adda Qadar Charity ku kafaala qaadeysay caruurtan ayaa waxaa ka qeyb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale.
Madaxa hay’adda Qatar Charity ee Soomaaliya Cabdinuur Xaaji Cali Mursal ayaa munaasabadda ka sheegay in hay’addooda ay kafaal qaadeyso nolosha in ka badan 350 caruur ah, horey u kafaalo qaaday caruur kale oo ku agoontoobay weerarkii Soobe.
“Hay’adda Qadar Charity halkaasi ugama harin howlihii gurmadka Qarixii Soobe, 500 oo caruur ah ayay horey u kafaalo gaaday, kuwaasi oo kamid ah agoontii 14 Oktoobar, waxaan maanta halkan aan u joognaa in aan siino lacagihii loo balanqaaday agoontaasi, sidoo kale waxaan u sameyn doonaa daryeel nololeed waxbarashadooda, caafimaadkooda, ilaa ay ka qaan gaaraan hadii ay weynaadaan waxaan u raadinaynaa waxbarasho Jaamacadeed” ayuu yiri Cabdi Nuur Xaaji Cali.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in wada jir looga qeyb qaato gurmadka loo sameynayo caruurta ku agoontoobay weerarkii 14-kii Oktoober sannadkii 2017-ka ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
“Dhamaanteen waxaa na looga baahan yahay inaan door muhiim ah ka qaadano sidii gurmad loogu sameyn lahaa caruurta Soomaaliyeed ee waalidkood ku wayay weerarkii cadowga geysteen, sidoo kale ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay meel uga soo wada jeesta dhibaatooyinka Al-shabaab ay ku hayaan shacabka” ayuu yiri duqa Muqdisho.
Wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Cabdirashiid Axmed Maxamed iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdulahi Xaamuud, ayaa ballan qaaday inay dhankooda door ka qaadan doonaan sidii loo garab istaagi lahaa caruurta agoonta.
Muddo hal sano ah ayaa laga joogaa weerarkii dhimashada badan sababay ee ka dhacay isgoyska Soobe 14-kii Oktoober 2017-kii maanta oo kale, iyadoo maanta munaasabaddo lagu xasuusanayo islamarkan loogu duceynayo dadkii ku dhintay weerarka, lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka.
SAWIRO:- Xukuumadda Soomaaliya Iyo Midawga Yurub Oo Kala Saxiixday €100 Milyan Oo Lagu Kabayo Miisaaniyadda Dawladda